LEGO VIDIYO 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
LEGO VIDIYO 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
10 / 04 / 2021 11 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1264 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, 43107 HipHop စက်ရုပ် Beatbox, အမေဇုံ, Asda, အချစ်ရယ်, Beatbox, အချစ်ရယ်, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Vidiyo, reviews, ဗီဒီယို
Lego VIDIYO 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox အလွန်စျေးကြီးသောအထုပ်တစ်ခုထဲတွင်အလွန်အေးမြသောအသေးစားရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းထားသည် - ၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ရာ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ Lego ထုတ်ကုန်ဖြစ်သင့်သည်။
reception ည့်ခံဖို့ပြောတာကမတရားဘူးလို့ကျနော်တို့မထင်ဘူး Lego VIDIYO ပိုမိုကျယ်ပြန်အကြားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအပြုသဘောမဖြစ်ခဲ့ဘူး Lego ရပ်ရွာ။ နှင့်၎င်း၏ BeatBoxes မှာစတင်နှင့်အတူ တတိယ အပါအဝင်အများဆုံးဗြိတိန်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှာ Zavviစာအရေးအသားသည်နံရံပေါ်၌ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုခံစားရ၏ Lego Group ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှု။
သငျသညျဆောင်ပုဒ်သွားလာရင်းပေးဖို့စဉ်းစားနေဆဲလျှင်, သို့သော်, ထိုစျေးနှုန်းချိုသာသော BeatBoxes တစ် ဦး နှင့်အတူရေငုပ်ထိုက်ပါသလား? သို့မဟုတ် - ကောင်းကင်ဘုံကတားမြစ်သည် - ဤလမ်းဆုံ၏အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်လိုအပ်ပါကလက်လီစျေးနှုန်းအပြည့်အစုံကိုပေးဆောင်ပါ Lego တေးသီချင်းအားလုံးကကော။
theme: VIDIYO အမည်သတ်မှတ်မည် - 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 73 အသေးစားပုံများ: 1
Lego: ယခုရရှိနိုင် Zavvi: ယခုရရှိနိုင်
မည်သည့်စျေးကိုသင်ပေးချေရန်အဆုံးသတ်ပါစေ 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox (သို့မဟုတ်ယင်း၏တစ်ခေတ်တည်းသား ၅ ယောက်အနက်) တည်ဆောက်မှု - သို့မဟုတ် ၄ င်း၏မရှိခြင်း - သည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ part တစ် ဦး တည်း count ကရိုးရာ၏လမ်းအတွက်အများကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသို့သဲလွန်စသင့်ပါတယ် Lego ဤနေရာတွင်ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်အတွေ့အကြုံ။
၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ရှုထောင့်နှစ်ဖက်ပုံစံဖြင့်သေတ္တာ၏နောက်ကျောတွင် tile အနည်းငယ်ချခြင်းပါ ၀ င်သည့်အလွန်တိုတောင်းသောတည်ဆောက်မှုကိုသာမကကျယ်ပြန့်သောဒြပ်စင်အသစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အချက်ကိုလည်းပါသက်ရောက်စေသည်။ သီးသန့်နှင့်အထူးဤရည်ရွယ်ချက်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းရဲ့အခြေခံသဘောသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်သိရန်သင်မာစတာဆောက်သူဖြစ်စရာမလိုပါ Lego အုတ်။ ဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေဘာကြောင့်ဒီဟာတွေလုံးဝလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရိုးရာအပိုင်းအစတွေပါတဲ့သေးငယ်တဲ့အကာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဟာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့၌ရှိသကဲ့သို့ ၄၃၁၀၈ Bandmatesသင်သည်ပုံနှိပ်ထားသော2×2tiles (သို့မဟုတ်) BeatBits သည်သင် app ကိုသို့ scan ဖတ်ရန်စီစဉ်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေမီးမောင်းထိုးပြသည်။ BeatBox တစ်ခုချင်းစီတွင် ၁၆ ခုကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှနှစ်ခုသာထူးခြားသော်လည်းကျန်ကျန်တဲ့များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကျပန်းဖြန့်ဝေသည်။ ဤအရာများ၏လက်လီစျေးနှုန်းပေးထားသောထိုအချိုးမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲခံစားရသည်။
BeatBox ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ထိုင်သည့်ခေါက်ပြားများပေါ်တွင်ကြွေပြား ၁၂ ခုကိုပြသနိုင်ပြီးကျန်အပိုင်းများကိုကျောဘက်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည် (နှင့်အစောပိုင်းကသင်အတူတကွစုစည်းထားသည့် mosaic ပုံစံဖြင့်နေရာယူထားသည်) ။ ၎င်းသည်သပ်ရပ်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မောင်းနှင်သောခံစားမှုဖြစ်သည်။
ဒီခံစားချက်ကံမကောင်းတာကသင်ပြီးဆုံးသွားတာကြာပြီဖြစ်လို့သင်နဲ့အတူရှိနေမှာပါxtraသာမန်အားဖြင့်အမြန်တည်ဆောက်ခြင်း 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox ပံ့ပိုးပေး။ ဤနေရာတွင်အရာအားလုံးသည်များသောအားဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာများထက်များစွာဝေးကွာနေသည်ဟုခံစားရသည် Lego သင့်ရဲ့စုဆောင်းမှု၏ကျန်, တစ် ဦး တည်းမှာအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူတကယ်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခဲယဉ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားသည်။
VIDIYOဒီဂျစ်တယ်ကစားကွင်းတွင်ယခင်က Hidden Side, သင်ကဒီတော့ကြိုးစားရန်ဤမျှလောက်ဖြစ်လျှင်, ရုံတိုးပွားလာအဖြစ်မှန်အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပျက်ကြောင်းအများအားဖြင့်အစိုင်အခဲအစုံတစ်ခုအကွာအဝေးအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်မလုပ်ခဲ့ရင်တောင်သင်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကျန်နေသေးပါလိမ့်မယ်။ အတူတူပြောဖို့ခက်တယ် 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox.
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော BeatBits အပြင်, ဤကြယ်၏အစစ်အမှန်ကြယ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox။ BeatBox ၏သေးငယ်သောပုံသဏ္rangeာန်အားလုံးသည်အားလုံးနီးပါးတွင်ပါဝင်သည် ၄၃၁၀၈ Bandmatesနှင့်ဤတုန်လှုပ်စေသောစက်ရုပ်အတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သူ၏အဓိကအားဖြင့်လူသတ်သမား၏ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းလက်ကောက်ဝတ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူပြည့်စုံသော ဦး ခေါင်း၊ ခြေထောက်နှင့်ကိုယ်ထည်ကအသေးစိတ်အားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုချိုမြိန်စေသည်။xtra လက်များသည်၎င်းကိုအစစ်အမှန်သဘောဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းပေးသည် အချို့သောအခြား VIDIYO minifigures ချို့တဲ့နေပုံရသည်။ သို့သော်…အသေးစားပုံစံတစ်ခုတည်းသည်£ ၁၇.၉၉ တန်သလား။
အဖြေကမဟုတ်ဘူး။ အချို့သော အသေးစားအသေးစားများသည်ထိုငွေပမာဏကို (သို့မဟုတ်ထိုထက်မကပို) တန်ဖိုးရှိနိုင်သည် Lego Star Wars BrickLink မှတစ်ဆင့်ကောက်ယူစုဆောင်းမှုကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့ဒီ particular minifigure သည်ပေါင် ၁၇.၉၉ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းကိုလုံး ၀ အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်အတွင်းကျကျကျန်အရာများမှမည်မျှတန်ဖိုးမည်မျှရရှိနိုင်ပါက 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox, သင်သည်ဤအစုံမဆိုအဘို့အပြည့်အဝစျေးနှုန်းပေးဆောင်ရပါမည်သည့်အတွက်အဘယ်သူမျှမမြင်ကွင်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။
ပေါင် ၁၁.၉၉ မှာလက်ရှိစျေးနှုန်းကို Zavviအနည်းဆုံး Asda စတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိသည့်အတွက်၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုအရသာရှိလာသည် မကြာသေးမီကစျေးနှုန်း အခြား BeatBox သည်ရိုင်းစိုင်းစွာပြောခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီစျေးနှုန်းတွေကွာခြားချက်ကကမ္ဘာကြီးရှိနေပြီးဒီအဆင့်မြင့်စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့အကယ်လို့သင်ဟာပူးတွဲပါအက်ပလီကေးရှင်းကိုတကယ်ဝင်ဖို့စီစဉ်နေရင်ပါ။
ဒီဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကဒီတန်ဖိုးကိုဘယ်တကယ့်တန်ဖိုးကထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်မလည်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းလိမ့်မယ် VIDIYO အနာဂတ်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်အကွာအဝေး, ဒါပေမယ့်၏အခြေခံပေါ်မှာ Lego တစ် ဦး တည်း - ဤသုံးသပ်ချက်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အတိုင်း - သင်၏အကောင်းဆုံးလောင်းကြေး Lego သူတို့အားတတိယအဆင့်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်နေရာချထားခြင်းအားဖြင့် Group သည်သူ့ဟာသူအသိအမှတ်ပြုထားသည်arty day-one အထူးလျှော့စျေးသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်အကြီးအကျယ်လျှော့ချမှသာလျှင်၎င်းကိုရောင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာဘာကိုတွေ့မြင်ရန်လွယ်ကူသည် Lego အုပ်စုနှင့်အတူရည်မှန်းခဲ့သည် VIDIYO'' s ကို 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox နှင့်၎င်း၏ counterparts ။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများအားလုံးတွင်စုဆောင်းထားသောကစားစရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကစားနိုင်ပြီးကစားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်ခုအောက်တွင်ကျရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောအချက်နှစ်ချက်ရှိသည် Lego အမှတ်တံဆိပ်လား
ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်အဖြေမှာခိုင်မာသည့်နံပါတ်တစ်ဖြစ်နိုင်သည် Lego ထုတ်ကုန်သည်အနည်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံအတွေ့အကြုံ (သင်ပေးရသောစျေးနှုန်းနှင့်ထိုက်တန်သောအရာ) ကိုအနည်းဆုံးပေးသင့်သည်။ 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ကစားစရာနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုမဟုတ်ပါ Lego အုပ်စုသေချာပေါက်ထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego မှ LEGO.com / Zavvi ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
၄၃၁၀၇ HipHop စက်ရုပ် BeatBox တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
သင်ငါးမိနစ်အကုန်လုံးအတူတကွစုဆောင်းပါ 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox, သင်ဖြည်းဖြည်းအရှိန်အဟုန်မှာယူလျှင်။
၄၃၁၀၇ HipHop စက်ရုပ် BeatBox တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
၇၃ ခုပဲရှိတယ် 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBoxသို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအတော်များများသည်သီးတောင့်ကိုဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုထားသောအသစ်စက်စက်၊ ကြီးမားပြီးသီးသန့်သောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။
၄၃၁၀၇ HipHop စက်ရုပ် BeatBox သည်မည်မျှကြီးသနည်း။
အားလုံးလိုပဲ Lego VIDIYO BeatBoxes၊ 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBoxအလျား ၈ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၇ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၀ စင်တီမီတာရှည်လျားသည်။ သငျသညျရှေးခယျြပါလျှင်, ပတ်ပတ်လည်သယ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သောသေးငယ်ပြီးကြံ့ခိုင်။
43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
လက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် 43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox သင့်ကိုမျက်စိကျစေမည့်£ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 ကိုပြန်ပေးမည်။ ဒါပေမယ့်သူကလက်လီအရောင်းဆိုင်အမျိုးမျိုးမှာအထူးလျှော့စျေးရရှိခဲ့တာကြောင့်စျေးနှုန်းအပြည့်အစုံမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
← LEGO GWP များ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်။ ၎င်းအတွက် VIP အမှတ်များရယူပါ
Lego Ideas Microgame ပြိုင်ပွဲဝင်သူများကမည်သည့်နေရာတွင်ကစားရမည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် →